कान्ती अस्पतालमा बाल मानसिक स्वास्थ्यका लागि भवन शिलान्यास
२०७४ जेठ २० शनिबार
काठमाडौं- कान्ति बाल अस्पतालमा बाल मानसिक स्वास्थ्य विभाग सञ्चालनका लागि छुट्टै भवन निर्माण हुने भएको छ। भवनको आज शनिवार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले शिलन्यास गरेका छन्।
अस्पताल परिसरमा निर्माण हुने उक्त भवन चार तले हुने छ। चार तले भवन पहिलो चरणमा दुई तलाको मात्र निर्माण हुनेछ। भवन निर्माणका लागि नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) नेपालले तीन करोड सहयोग उपलब्ध गराउने छ। सहयोगका विषयमा सिविन र अस्पतालबिच गत माघ ७ गते सम्झौता भएको थियो।
भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री थापाले कान्ति अस्पताललाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउन यो सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘बालबालिकाको उपचारका लागि यो अस्पताल भरोसाको केन्द्र हो,’ उनले भने, ‘त्यसकरण कान्ति अस्पतालमा हरेक विधाको गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।’ उनले अस्पतालको विस्तार कार्यलाई क्रमश अगाडी बढाउँदै लैजाने तयारी भैरहेको पनि जानकारी दिए।
अस्पतालमा दुई वर्षअघि मात्र पूर्णकालीन बालमनोरोग क्लिनिक खोलिएको थियो। भूकम्पपछि बालबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक असर कम गर्ने उद्देश्यले कान्ति बाल अस्पताल र सिविनको संयुक्त पहलमा बाल मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
नेपालमै पहिलो पटक सुरु भएको उक्त क्लिनिकमा सेवा लिन आउने बिरामीको चाप बढ्दो क्रममा रहेको बालमनरोग विशेषज्ञ डा। अरुण कुँवरले जानकारी दिए। उनले नयाँ भवनको निर्माणपछि बाल मनरोगको उपचारमा ठूलो सहयोग मिल्ने बताए।
हाल क्लिनिकमा विशेष गरी बच्चाको उमेर बढ्दै जाँदा उमेरअनुसार शारीरिक, मानसिक विकास नहुने, डरका कारण उत्पन्न हुने एन्जाइटी डिसअर्डर, सिजोफ्रिनियाजस्ता कडा समस्या भएका, आवश्यकताभन्दा बढी चकचक गर्ने, सुस्त मनस्थिति भएका, वौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका आउने गरेका छन्।
त्यसैगरी स्कुल जान नसक्ने बालबालिका, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बेहोस हुने जस्ता समस्या भएर अन्य चिकित्सककहाँ देखाए पनि निको नभएका बालबालिकालाई लिएर अभिभावक आउने गरेको डा. कुँवरले बताए।
धामीझाँक्री, डाक्टरहरु सबैतिर देखाएपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र आफूकहाँ आइपुग्ने बालबालिकाको उपचारमा तीन कुरालाई नजिकबाट नियाल्ने गरेको डा. कुवँर बताउँछन् । ती तीन कुरामा बिरामीकोे व्यवहार, स्कुलको वातावरण र घरको वातावरण पर्छन्। ‘यसको अध्ययन पश्चात् बालक हुर्किरहेको वातावरणमा कुन कुराले उसलाई असर पारेको छ त्यो प्रमाणित गरी त्यसै अनुसारको परामर्श तथा थप उपचार गरी अवस्था जटिल भएमा औषधी पनि चलाउने गरेका छौं,’ उनले भने।
उपचारका क्रममा निरन्तर परामर्श लिन अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ तर उपत्यका बाहिरका बिरामीहरु त्यसलाई निरन्त्तरता दिन नसक्ने भएकाले त्यो अवस्थामा पनि औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको डा. कुँवरले बताए ।
विशेष गरी बालबालिकामा यस्ता समस्या आउन नदिन अभिभावक नै सचेत हुन आवश्यक छ। घरको वातावरण अनुशासित र प्रेणादायी बनाउन हरेक सदस्य सचेत हुनुपर्ने डा. कुँवरले सुझाव दिए। डराउने, थर्काउने, धम्काउने जस्ता क्रियाकलाप कहिले बालबालिकाको अगाडि गर्नु नहुने उनले बताए।
Source: swasthyakhabar.com (2017-04-07)